UFreese uthi iPirates ithole isibabuli sempela kuSaleng
USaleng isibabuli sangempela, iPirates ihlabene, kusho uFreese
July 16, 2021 July 16, 2021 Impempe.com
U-Allan Freese obeqeqesha umdlali omusha we-Orlando Pirates, uMonnapule Saleng, uthi lihlabene okwangempela leli qembu laseSoweto. USalenge ungomunye wabadlali abamenyezelwe yiPirates ngesonto elidlule njengomunye wezoqinisa ngabo iqembu.
UFreese ubemqeqesha kwiFree State Stars ngesizini edlule uSaleng kanti akangabazi ukuthi uzophumelela kwiPirates. Uthi akukho uSaleng ashoda ngakho, udinga ukunikwa ijezi nje angene eenkundleni enze umsebenzi.
“Okokuqala nje ngifuna ukudlula la ekutheni ngimbongele ngokusayina kwiPirates. Kumfanele,” kusho uFreese ekhuluma neMpempe. “Izinga akulo limenza kumfanele ukudlala esigabeni esiphezulu.
“Ngifuna nokumbongela nangokuthi abizwe kwiBafana la asefike wakukhombisa khona ukuthi asimncomi nje mahhala, kodwa ibhola likuye, uzalwe nalo,” kuqhuba uFreese. USaleng ungomunye wabadlali abakwiBafana Bafana edlala kwiCosafa Cup eqhubekayo eGqeberha.
Kule midlalo asayidlalile uSaleng ukhombise ukuba ngumdlali osezingeni elihle kakhulu. Nguye onikwe umsebenzi wokuba yinjini yeBafana. Uhlanganisa iminyakazo yokuhlasela futhi nguye okhahlela ama-free kick namakhona.
“Muhle kakhulu uma egijima eqhamuka ophondweni, uligoba kahle kakhulu ibhola futhi liya lapho efuna khona. Ngamfica enamahlonyana ngamsiza ekulungiseni izinto ezincane ngabe sengimgqugquzela ukuthi azethembe.
“Ukusuka lapho uvele wakhula ngendlela engenze ngaziqhenya. Angingabazi ukuthi uzoba yisihlabani esizobe sibatshazwa yonke indawo ngesizini ezayo uma enikiwe ithuba lokudlala kwiPirates.
FUNDA NALA: UHunt ungene ngobuso esidlekeni samaqendevane ngokuya kwiChippa
“Ibhola uyalazi futhi uyakwazi lokho yingakho ebonakala ezethemba nje nakwiBafana kungathi kudala afika. NakwiPirates kuzoba yinto efanayo ngoba uyazethemba kakhulu okuyinto enhle kakhulu ngaye,” kuchaza uFreese.
KwiBafana uSaleng udlala le ndawo ebizwa ngonombolo 10, ulandela abagadli ngemuva. KwiPirates le ndawo iyaye idlalwe nguThembinkosi Lorch obehlushwa wukulimala ngesizini edlule.
Previous Previous post: UHunt ulahlwe elakubo ezifaka ngobuso esidlekeni samaqendevane
Next Next post: USirino ‘oseqome engxenye’ usephinde wayinximfela iSundowns